Firefox 93 horey ayaa loo fasaxay kuwana waa warkiisa | Laga soo bilaabo Linux
Xulka wararka oo dhan | 05/10/2021 20:39 | La cusbooneysiiyay 07/10/2021 04:53 | Aplicaciones
Nooca cusub ee Firefox 93 horey ayaa loo sii daayay oo ay weheliso casriyeyn loogu talagalay noocyada leh waqti taageero dheer: 78.15.0 iyo 91.2.0.
Hal -abuurnimada ugu weyn ee ka dhex muuqata noockan cusub ee biraawsarka waxaan ka heli karnaa faylka iswaafajinta waa karti sida caadiga ah loogu talagalay qaabka muuqaalka AVIF (Qaabka muuqaalka AV1), kaas oo adeegsada teknoolojiyada isku-buufinta ee intra-frame ka sameysan qaabka muuqaalka muuqaalka ee AV1.
Waxay ku taageertaa meelaha midabka leh gamut midab oo buuxa oo xaddidan, iyo sidoo kale beddelidda hawlgallada (wareegga iyo muraayadda).
Mid kale oo ka mid ah isbeddelada ka muuqda qaabkan cusub ayaa ah waxaa loo wareejiyay qeybta mashiinka WebRender ee qasabka ah, kaas oo ku qoran luqadda miridhku oo u oggolaanaysa in la gaaro koror aad u weyn xagga xawaaraha wax -soo -saarka oo la yareeyo culayska saaran CPU sababta oo ah wareejinta hawl -gallada gudbinta ee ka kooban bogga bogga GPU -ga, oo lagu hirgeliyo ku shaqaynaya GPU -ga.
Waxaa sidoo kale la iftiimiyay in qaabkan cusub wuxuu ku daray lakab xalliya dhibaatooyinka sabuuradda ee bay'adaha ku salaysan hab -maamuuska Wayland. Waxa kale oo ka mid ah isbeddello si loo tirtiro gariirinta marka daaqadda loo wareejinayo cidhifka shaashadda marka la isticmaalayo Wayland ee hababka kormeerayaasha badan.
Daawadaha isku dhafan ee PDF wuxuu hirgeliyaa awoodda furitaanka dukumiintiyada leh foomamka XFA -yada is -dhexgalka, oo guud ahaan loo adeegsado qaab elektiroonig ah oo laga helo bangiyada kala duwan iyo hay'adaha dawladda.
Intaa waxaa dheer ka -hortagga soo -dejinta faylasha loo soo diray HTTP iyada oo aan sir la gelin, laakiin waxay ka bilaabantay bogag laga furay HTTPS. Soodejinta noocan oo kale ah lagama ilaaliyo xatooyada aqoonsiga iyadoo ay ugu wacan tahay xakameynta taraafikada taraafikada, laakiin maadaama la sameeyay markii la beddelo bogagga uu furay adeegsaduhu HTTPS, waxaa laga yaabaa inay abuurto aragti been ah oo ammaankooda ah. Haddii la isku dayo in la raro xogta noocaas ah, adeegsadaha waxaa la tusi doonaa digniin u oggolaanaysa inay sii daayaan qufulka haddii ay rabaan.
Intaa waxaa sii dheer, soo dejinta faylka ee iframes go'doonsan oo aan si cad u qeexin sifaha soo-dejinta oggolaanshaha hadda waa mamnuuc oo si aamusnaan ah ayaa loo xannibi doonaa.
Isbeddel kale oo muhiim ah waa iHirgelinta habka SmartBlock oo la hagaajiyay, oo loogu talagalay in lagu xalliyo dhibaatooyinka ka jira goobaha ka soo ifbaxa xannibaadda qoraallada dibadda ee habka daalacashada gaarka ah ama kicinta xannibaadda la xoojiyay ee waxyaabaha aan la rabin (adag).
SmartBlock waxay si otomaatig ah ugu beddeshaa qoraallada loo adeegsaday dabagalka dabagalka si loo hubiyo raridda goobta habboon. Stubs ayaa loo diyaariyey qaar ka mid ah qoraallada raadraaca isticmaalaha caanka ah ee ku jira Kala -goynta. Nooca cusub waxaa ka mid ah xannibaadda la -qabsiga ee qoraallada Google Analytics, qoraallada shabakadda xayeysiiska Google, iyo Optimizely, Criteo iyo widget -yada adeegga Amazon TAM.
Baadhitaanka khaaska ah iyo xannibaadda adag ee qaababka aan la rabin (adag), ilaalinta dheeraadka ah ee cinwaanka HTTP “Referer” ayaa la awooday.
Daaqadaha, taageeridda soo dejinta tab xusuusta otomaatiga ah ayaa la hirgeliyay, haddii heerka xusuusta xorta ah ee nidaamka uu gaaro qiime aad u hooseeya. Marka hore, tabyada ugu xusuusta badan ee adeegsaduhu uusan helin muddo dheer ayaa la soo dejinayaa. Markaad u beddesho tab la soo dejiyay, waxa ku jira si otomaatig ah ayaa dib loo raraa.
On Linux, waxaa lagu ballanqaaday inay ku darto shaqeynta la cayimay mid ka mid ah noocyada soo socda.
Qaabka guddiga soo dejinta ayaa lagu hagaajiyay qaabka muuqaalka guud ee Firefox.
Qaabka isku dhafan, dhex-dhexaadinta u dhexeysa alaabta menu-ka ugu weyn, menu-ku-darka, bookmarks, iyo taariikhda daalacashada ayaa la yareeyay.
SHA-256 ayaa lagu daray tirada algorithms-ka loo adeegsan karo abaabulka xaqiijinta (xaqiijinta HTTP) (markii hore MD5 keliya ayaa la taageeray).
Ku naafoobay ciphers -ka TLS ee caadiga ah ee adeegsada algorithm -ka 3DES. Tusaale ahaan, TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA cipher suite wuxuu u nugul yahay weerarka Sweet32.
Soo noqoshada taageerada 3DES waxay suurtogal ku tahay oggolaansho cad oo ku jira qaababka hore ee TLS.
Meesha macOS, dhibaatada luminta kalfadhiyada marka Firefox ka bilowdo faylka ".dmg" ee la rakibay waa la xaliyay.
Sidee loo rakibaa nooca cusub ee Firefox 93 ee Linux?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Firefox 93 horey ayaa loo fasaxay kuwana waa warkiisa